Updated News in Nepali from all over the world at : http://nepali.reaknlinks.com. बिएल बिशेष
मेरो थुप्रै आग्रहपछि स्वामीजीले भने, ‘इट्स टु लेट। (अब धेरै ढिलो भइसक्यो)।’ मैले त्यतिखेर यसको अर्थ बुझिनँ। त्यसको चार वर्षमै बीपीको निधन भएपछि पो झल्याँस्स भएँ। उनले भन्न खोजेका रहेछन्, ‘बीपी जिन्दगीको उत्तर्राद्र्धमा छन्। उनलाई भेटेर कुनै काम छैन।’
बीपीको राजनीतिक उचाइ यस्तो थियो कि भारतमा मात्र होइन, चिनियाँ नेताहरूसँग पनि उनको निकटस्थ सम्बन्ध थियो। बौद्धिकता,सुझबुझ, संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रतिको अविचलित अडानका कारण उनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बनाएका थिए। अझ भारतका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्षस्थ नेताहरुसँग त उनको पारिवारिक जस्तै सम्बन्ध थियो। यो तहको सम्बन्ध सायदै अरु कुनै नेपाली राजनीतित्रको थियो, न निकट भविष्यमा हुने सम्भावना छ।
उनी आफू निकै पीडामा भएको तर मिडियाले अनावश्यक मसला बनाएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘के मिडियाको धर्म भनेको पीडितलाई पीडा दिनु हो? जुन कुरा मैलै भन्दै भनेको छैन, त्यो कुरालाई मुख्य समाचार बनाएर मिडियाले झनै दुःख दियो।’